निवर्तमान (Nibartaman) ||: झिलिमिली काठमाण्डू !
झिलिमिली काठमाण्डू !
तिहारको विदामा देश दर्शन गर्ने सोँच बन्यो । अनि काठमाण्डूबाट नुवाकोट रसुवातिर डुल्नको लागि विश्लेषक युग पाठक, पाठकपुत्र इशान पाठक, पत्रकार मित्र नरेश ज्ञवाली र मसहितको चारजनाको टोली निस्कियो मोटरसाइकल यात्रामा ।
३ दिनको नुवाकोट रसुवा यात्रा सम्पन्न गरी फर्कने क्रममा शिवपुरी वनको नाकाबाट काठमाण्डू उपत्यका प्रवेश गर्दैगर्दा काठमाण्डूमा तिहारको रंगीन माहोल विस्तारै सुरु हुँदै गयो । घाम छँदासम्म सादा देखिने काठमाण्डू घाम डुबेर अँधेरी सुरुभएसँगै क्रमशः झिलिमिली बन्दै गयो । हो, बत्तिको झिलिमिली ।
तिहारको लक्ष्मी पूजाकै दिन शिवपुरीको काँठबाट उपत्यकाको झिलिमिली नियाल्न ठ्याक्कै एक घन्टाको अन्तरालमा यी दुई तस्बिर खिचियो जसले सादा काठमाण्डू र झिलिमिली काठमाण्डूलाई प्रतिबिम्बित गरेका छन् ।
सुनिँदै छ काठमाण्डूलाई अब लोडसेडिंग मुक्त बनाउने रे । अब काठमाण्डूको यो झिलिमिली शायद कायमै रहनेछ ।
(शब्द तस्बिरः मनिकर कार्की)
बुटवल र लेखनयात्रा
ट्रम्प विजयको तरंग : बिकेकै हो त चर्को राष्ट्रवादक...
झिल्टुङ साहित्य यात्रा